काठ लागि ज्वाला retardants। बाहिरी लागि काठ को पूरण
पछिल्लो वर्ष, रूख लोकप्रिय निर्माण सामाग्री छ। यसको पर्यावरणीय मित्रता, गर्मी घर भित्रका सास फेर्न र सुरक्षित राख्ने क्षमता निजी सम्पत्ति को धेरै मालिकहरूलाई indifferent छैन। साथै, यस्तो संरचना अत्यन्तै सुन्दर उपस्थिति र अनुकूल आन्तरिक जलवायु छ। तर, सकारात्मक पक्ष बाहेक, काठ एक ठूलो बेफाइदा छ - यो छिटो flammability छ। यस्तो सुविधा को निर्माण को चरण मा यसको flammability कम र भवन कम आगो जोखिम बनाउन मदत, काठ लागि ज्वाला retardants प्रयोग गर्नुपर्छ किन छ।
उपकरण कस्तो, केही प्रजाति, तिनीहरूले कार्य को सिद्धान्त हुन सक्छ र आफ्नो चयन मापदण्ड यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
लौ retardants के हुन् र तिनीहरूले कस्तो काम गर्छन्?
लौ retardants - यस्तो संरचना को तीव्र ज्वलन रोक्न विभिन्न तरिकाहरू छन् कि काठ तत्व को उपचार को लागि एक विशेष योगों। यी एजेन्ट संग गर्भवती सामाग्री एक विनाशकारी आगो को प्रभाव सामना गर्न केही समय सक्षम छन् र जल गर्न सकिन्छ। काठ लागि ज्वाला retardants एक अपेक्षाकृत कम पग्लिने बिन्दु छ, त्यसैले आफ्नो सक्रिय सामाग्री यो काठ नै मा आउछ पनि अघि यसको सुरक्षा कार्य गर्न थाल्छन्। पग्लिने समयमा समाधान घटक गर्मी स्रोत मा अक्सिजन को ingress बाधित कि दहनशील ग्याँसहरु फेंकना, त्यसैले यसलाई टाढा विस्तार गर्दैन र फीका गर्न थाल्छ।
ताप समयमा बोरिक एसिड र फस्फोरिक एसिड आधारित नुनखरा पूरण एक काठ सतह सुरक्षा फिलिम को कपडे संरचना मा ज्वाला प्रवेश रोक्छ जो गठन गर्ने।
"- retardant घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने" यो केही संयोजन रचनाहरूको चिन्ह लगाइएको हुन सक्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। आगो सुरक्षा र सूक्ष्मजीवहरु बसोबास को रोकथाम: यो काम समाधान को तयारी को लागि पाउडर दुई उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
आगो प्रतिरोधी एजेन्ट को प्रकार
काठ सुरक्षा आगो विरुद्ध पूरण वा कोटिंग को माध्यम द्वारा बाहिर छ।
उत्तरार्द्ध प्रकार पेंट, वार्निश, र विशेष पेस्ट समावेश छ। यो एक महत्वपूर्ण drawback छ किनकी यो, धेरै कम प्राय प्रयोग गरिन्छ। पूर्ण कोटिंग प्राकृतिक काठ संरचना, जो adversely सम्पूर्ण निर्माण को उपस्थिति असर लुकाउनुहोस्। यस कारण तिनीहरूले मात्र लुकेका सतहहरु मा प्रयोग गर्नुपर्छ। लौ retardants सुन्दर काठ reliefs भन्दा रंग छैन र पनि तिनीहरूलाई रेखांकन।
यो दृश्य weatherability र अस्थिर समाधान विभाजन गरिएको छ। अस्थिर (अर्को शब्दमा - को leachable) मतलब चिस्यान स्तर नबढाईकन कहाँ 70% बन्द कोठा मा प्रयोग गरिन्छ। यस्तो समाधान एक कम लागत छ। प्रयोग FACADES को उपचार को लागि गर्भवती काठ आउटडोर प्रयोगको लागि, जो चिस्यान उच्च प्रतिरोध संग endowed छ।
धन को विकल्प
एक वा अर्को तरिका छनौट, तपाईं सबै आगो-retardant उत्पादनहरु यसको गुणस्तर certifying दस्तावेज हुनु पर्छ भनेर बिल्कुल थाहा हुनुपर्छ। विक्रेता उपयुक्त प्रमाणपत्र देखाउन सक्छौं भने, यो आवश्यक छैन उनको सामान पक्षमा एक विकल्प बनाउन संभावना छ रूपमा उहाँले खातामा आवश्यकताहरू लिएर बिना गरिएको थियो र मानिसहरूलाई खतरनाक हुन सक्छ।
(जस्तै बीम र समर्थन संरचना रूपमा) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व रक्षा गर्न अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित जो बाहिरी प्रयोगको लागि काठ को पूरण लागि प्रयोग गरिन्छ।
भित्री सतहहरु लागि, एक सजावटी समारोह प्रदर्शन, जो विभिन्न रङहरू पूरक गर्न सक्छन्, पानी आधारित impregnate गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि मामला मा, काठ लागि लौ retardant निम्न आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ:
- हावा मा हानिकारक पदार्थ उत्पादन गर्ने घटक को एक संरचना छ;
- काठ (पर्यावरण, वेंटिलेशन, आदि) को प्राकृतिक गुण उल्लङ्घन;
- आवेदन वातावरण पूरा।
को ज्वाला-retardant उपचार को सकारात्मक सुविधाहरू
1 आगो विरुद्ध भवनहरु को सुरक्षा को उच्च डिग्री। आगो को मामला मा, काठ संरचना CHAR गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रकाश छैन।
2. ज्वाला retardants संरचना, उद्देश्य र मूल्य मा फरक, प्रजाति धेरै छन्। तसर्थ, खरीदार कुनै पनि आवश्यकताहरु पूरा गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
3. काठ लागि हालतमा लागू प्रक्रिया, उपचार आफ्नै हातले बाहिर गर्न सकिन्छ महंगा विशेषज्ञ सेवा resorting बिना पर्याप्त सरल छ।
सतह impregnations मा प्रवेश को डिग्री
काठ लागि ज्वाला retardant गहिरो वा बाहिरको प्रवेश हुन सक्छ।
प्रशोधन घरेलू समयमा सतह पूरण प्रयोग गर्दछ। अक्सर मालिक कवर भवन को पर्खालहरु पहिले नै समाप्त, त्यसैले अचाक्ली असम्भव पूरण प्रदर्शन हो। सतह समाधान को लागत सानो छ, त्यसैले सुरक्षा निकै कम विशेषताहरु। समाधान एक ब्रश, रोलर वा स्प्रे संग लागू गरिएको थियो।
गहिरो उपचार सामाग्री राम्ररी सुकेको र पहिले नै छ जो पछि भवन निर्माण को लागि प्रयोग विशेष कन्टेनर मा काठ, soaking द्वारा बाहिर छ। यस्तो सुरक्षा सबैभन्दा विश्वसनीय मानिन्छ।
र जब topically लागू, तर यो मामला मा काठ को संरचना मा आफ्नो अवशोषण को हदसम्म soaking समयमा भन्दा धेरै कम हुनेछ को पाठ्यक्रम, तपाईं काठ गहिरो मर्मज्ञ ज्वाला retardants प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
आगो retardants ह्यान्डल गर्ने मा उपयोगी सुझावहरू
जे लौ retardant लागि चयन हुन सक्छ काठ को पूरण, को विश्वसनीयता यसको आवेदन नियमहरू कडा पालन निर्भर सुरक्षा। यसरी, नुन समाधान को उपचार बाहिर विशेष न्यानो मौसम समयमा,525 डिग्री र कम चिस्यान बाट लगे गर्नुपर्छ तापमान मा। एक वृद्धि नुन सामग्री जंग हुन सक्छ रूपमा, धातु संग सम्पर्क जोगिन।
यो चिस्यान अवशोषित र सुनिनु रूपमा पानी आधारित काठ लागि ज्वाला retardants पुरानो काठ को पूरण लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन हुन र टूट।
15 + 40 डिग्री - गैर-नुन Impregnating तापमान दायराबाट मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। चाँडै यी प्रकारका सामाग्री संरचना मा भित्र पस्नु, तर विषाक्तता मा फरक। यसबाट, धन मात्र बाहिरी लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सतह पेंट, वार्निश र अन्य यौगिकों संग लेपित पर्याप्त ड्राई हुनुपर्छ। काठ को पूर्व-ताप सम्भव 5-8 मिमी 3-4 मिमी देखि सुरक्षा एजेन्ट को प्रवेश को गहिराई वृद्धि बनाउँछ।
सुरक्षा कोटिंग्स हालतमा
उल्लिखित रूपमा, काठ को सुरक्षा पहनने प्रतिरोधी मोहरा पेंट्स र वार्निश को माध्यम द्वारा बाहिर गर्न सकिन्छ। यस्तो कोटिंग्स2भागमा विभाजन गरिन्छ: intumescent वा intumescent।
पहिलो समूह वृद्धि तापमान सामाग्री आगो को काठ गर्न विस्तार गर्छ जसद्वारा छैन, विनियोजन चिस्यान र एक अक्रिय ग्याँस छ दरार सुरु संग मा विशेषता छ।
आगो fillers र बनेको गर्दै दोस्रो समूह अर्थ तरल ग्लास। यस्तो कोटिंग्स 100 मिनेट आगो सामना गर्न सक्छन्।
संग रंग रचनाहरूको rotting र सूक्ष्मजीवहरु जाँच, मोल्ड सुरक्षित छन्।
उत्पादन खपत र सेवा जीवन
नुनखरा समाधान धेरै गरिबी एक काठ सतह मा सुरक्षित तथापि, सुरक्षा को अधिकतम डिग्री हासिल गर्न, यो आवश्यक प्रत्येक मीटर kvadrany सतह प्रति कम्तिमा 400 ग्राम प्रयोग छ। किनभने कमजोर निर्धारण पूरण को काठ मा गहिरो भित्र पस्नु छैन, र चाँडै टाढा धोए। यस कारण, पटक-पटक उपचार2वर्ष भन्दा कुनै पछि बाहिर गर्नुपर्छ।
गैर-नुन पूरण त impregnate समाधान को धेरै कम गर्नुपर्छ, रूख को संरचना मा भित्र पस्नु धेरै सजिलो छ। 1 मिटर2हालतमा को बारेमा 280 ग्राम प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो सुरक्षा सेवा जीवन बाहिरी प्रयोगमा5वर्ष र आन्तरिक लागि 15 वर्ष छ।
को आवृत्ति रंग को कवरेज सामाग्री 6-7 वर्ष छ।
काठ सतहहरु को संचालन मा नियमित आफ्नो अवस्था द्वारा inspected गर्नुपर्छ। त्यहाँ झर्ने सुरक्षा कोटिंग वा 70% भन्दा धोएका पूरण सजिलै देखिने chipped थिए भने चाँडै सम्भव पुन प्रशोधन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
लौ retardant गुणस्तर कसरी जाँच्न
उपचार गरे संरचना मा आगो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, यो खरिद धन गुणस्तर परीक्षण गर्न सम्भव छ।
यो गर्न, काठ को एक सानो टुक्रा अवस्थित समाधान मा गर्भवती र राम्ररी सुक्खामा अनुमति दिएको छ। त्यसपछि नमूना ignited र निरन्तर रासायनिक प्रतिक्रिया पालन गरिएको छ। एक गुणवत्ता समाधान भने, टुक्रा बाल्न छैन र बिना ज्वाला उठे जलना प्रशोधनका लागि प्रयोग भएको थियो। 0.5 मिनेट को अन्त मा, पट्टी को सतह, CHAR गाढा गर्न सक्छन्, तर कुनै मामला मा आगो पकड छैन!
यदि ज्वाला देखियो छैन, संसेचन आवश्यकताहरु अनुसार गरिएको थियो र भवन थप प्रशोधनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष मा, काठ बनेको सामाग्री र पर्खालहरु को समसामयिक प्रक्रिया, आगोको जोखिम कम गर्न र पनि जीवन बचाउन मद्दत गर्छ धेरै पटक। त्यसैले परिवार सबै सदस्यहरु आफ्नै सुरक्षा र स्वास्थ्य मा सुरक्षित छैन। उत्पादनहरु ज्ञात र राम्रो-स्थापित ब्रान्ड, आफ्नो सम्पत्ति को उत्कृष्ट गुणस्तर ग्यारेन्टी जो प्रयोग गर्नुहोस्।
जो कार्यहरु सुरक्षा गर्न सकिन्छ?
यो मिश्रित काठ सँगै: विधि र प्रविधिहरू। आकृति बीम
चयन गर्न के - छत मा Profiled? विनिर्देशों र समीक्षा
ग्रेनाइट टाइल्स। ग्रेनाइट टाइल्स बिछाउने
भित्री ढोका: बक्स को आयाम। ढोका को आयाम भित्री ढोका फ्रेम
लीन तर स्वादिष्ट - शाकाहारी सूप
बाढीको साथमा केशको साथ मास्क
वी टन: समीक्षा, कन्फिगर च्यानल, शुल्क
Multivarka ब्रान्ड: एक योग्य विकल्प
Kuppersberg प्रविध: ग्राहक समीक्षा
के खाद्य पदार्थ गर्न खान क्याल्सियम? पूर्ण सूची को उत्पादनहरु संग क्याल्सियम
Neverland ... मिश्र Safaga - लाल समुद्र मा एक अद्वितीय रिसोर्टमा
इन्डोर पानी पार्क, सोची: एक अवलोकन, सुविधाहरू, रोचक जानकारी र समीक्षा
मान्छे के मीठो शब्द सबैभन्दा उपयुक्त?